U soo ducee inuu i soo waco oo i cafiyo. ? 10 daqiiqo gudahood
Duco inaad i soo wacdid oo waxaad i weydiisataa cafis ma ahan ficil ikhtiyaari ah, sida dad badani ay u arkaan.
Waa, ficil xorriyadda iyo bogsashada gudaha.
Mararka qaarkood waxaan haysannaa dad nolosheena ah oo had iyo jeer waxyeello noo geysta laakiin sabab kasta oo jirta awgeed, iyo sidii wax la yaab leh ay u muuqan karaan, si fudud uma oggolaan karno.
Si kastaba ha noqotee, qofkaasi wuxuu ku dhammaanayaa inuu naga tago nabarro fara badan oo aan weli bogsan iyo illaa iyo inta uusan bogsanayn weligiis weligiis waa xidhnaan doonaa maxaa yeelay waxay noqon doontaa marxalad nolosheena ah oo aan weli laga adkaan.
Tani waa sababta salaaddani ay muhiim u tahay, wicitaan halka ay cafintu ka tahay horjoogaha ayaa ah mid dhakhso u bogsanaya booska, shaki la'aan, waxaan diyaar u nahay inaan bilawno.
Bilaabidda nolol cusub adiga oo aan dhammayn wareegyada wareejinta waxay la mid tahay isku dayga inaad uga dul dhisto dhisme burbursan mid kale oo aan u adkaysan duufaan maxaa yeelay goor dhow, dhismaha cusubi wuxuu sidoo kale ku dhammaan doonaa dhici doona. Ma jiro salaad daacad ah oo laga sameeyay fikirka keli ahaanta.
1 Salaadu ma i soo wici kartaa oo cafis weydiisataa marwalba way shaqeeysaa?
1.1 Salaadda si aad iigu soo wacdid 10 daqiiqo gudahood.
1.2 Idinku soo duceeya inaad i raadisaan 10 daqiiqo gudahood oo aad cafis weydiisataan
1.3 Salaadda rajo la’aanta in la i soo waco
1.4 Salaadda San Antonio ii soo wac
Salaadu ma i soo wici kartaa oo cafis weydiisataa marwalba way shaqeeysaa?
Salaadaha ku xusan qodobkaan had iyo jeer wuu shaqeeyaa. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad rumaysad ku tukatid.
Waxaan tusi doonaa 4 kaladuwan oo kaladuwan oo kaladuwan. Waad u duceysan kartaa dhammaantood isku maalin, si aad u hesho xoog badan.
Haddii aad rabto inaad joojiso dhibaatadaada waa inaad bilowdaa tukashada hadda. Gargaarka Ilaah oo keliya ayaa i heli doona inaan si dhaqso leh kuu soo waco.
Ha ku lumin waqti dheeraad ah, waxay gudbisaa jumladaha hoosta ku qoran!
Salaadda si aad iigu soo wacdid 10 daqiiqo gudahood.
Sayidow, waxaan ahay qof aamin ah oo aamin ah, oo caawimaad weydiisanaya, wuxuu kaa codsanayaa inaad isaga siiso wicitaan muhiim ah, kaasoo qeexi kara waxyaabo badan.
Waxaan rabaa wicitaankaas iyo inuu wanaagsan yahay, inuu keenayo war wanaagsan San expedito.
Adiga, ilaaliyahayga aaminka ah, waxaad ku haysaa qofka inuu go'aan ka gaadho wanaaggayga.
Toban daqiiqo waxay noqon kartaa waqti macquul ah qofkaasi inuu noo yimaado, laakiin xusuusnow salaadu inay wax walba sameyn karto.
Xaaladaha xitaa rajo daran ka dib xitaa talaabooyin aad u xun ayaa in la dabaqaadaa. Ducada wicitaanka ee tobanka daqiiqo waa lagu dabaqi karaa xaaladaha degdegga ah, halkaas oo aysan jirin wax bini-aadamnimo ah oo suurtagal ah oo la sameeyo oo keliya waa inaanu ku dheelnaa dhammaan caqiidadeena tukashada, waa in la ogaadaa, inay tahay mid awood leh.
Waxaan ognahay in runtu ay had iyo jeer fure u tahay jumladduna ay isku mid tahay. Waa la samayn karaa wakhti kasta waana inuu ka tarjumaa oo kaliya iimaanka iyo baahida aan u leenahay markaan tukano.
Salaadda si aad iigu raadiso 10 daqiiqo gudahood oo i weydiiso cafis
Waan jeclahay Saint Cyprian, wanaaggaaga iyo barwaaqadaada barakeysan ee kuwa ku dacweyn, waxaan kaa baryayaa naxariis, waan ku baryayaa, jannada, u oggolow in aan u sujuudo, in la ii raadsado nafta iyo jirka, waayo waxaan u baahanahay jacayl, jacaylkaaga iyo shirkadaada, oh, San Cipriano, awood badan!
Markay codsigu u noqdo mid kuu sahlan, waxaan u baahanahay inaad i siiso mucjisooyinka aad iga doondoontid xiisahaaga iyo jacaylkaaga ugu fiican ...
Oh, Sayidow, ha u yeelo (magiciisa dhah) ha i raadiyo markii uu ka soo kaco sariirtiisii ​​iyo markii la seexanayay mar labaad… maxaa yeelay aniga kulligood aniga ayaa ah!
In uu iga maqanyahay, oo uusan noolaan karin noloshiisa la'aantiis ... oh, ilaaliyaha dhibbanayaashu aaminka ah ee aan jecel nahay oo aan haddana baryeynno ... samee jaceylka aan u adeego, dib ugu noqo himilooyinkiisa oo i raadiya, wuxuu u qoraa inuu aniga igu haysto dhinaca iyo in cagihiisa uu geeyo kursiga, halkaas oo uu iga helo ...
Oh, mucjiso naftu ku baroorato, nolosha i sii, xasilloonow oo i sii wax kasta oo ii sheega, in soo laabashada gacaliyahaygu ay aad ugu dhowdahay ...
Benemérito San Cipriano, barakadaadu way ii timid waxayna la timid, mucjisadii aan u rajeeyay, Aabbahay ...
Aabe Quduus ah! Aamiin
Tukashadani waa mid aad u awood badan oo waa in lagu sameeyaa gudaha dhacdooyinka degdegga ah ee dhabta ah Ma noqon karno keli-talisnimo oo aan weyddiisanno annaga oo aan ka fikirin qofka kale.
Is-xasilinta qalbiga inta badan waxay kuxirantahay qof kale, laakiin hadaan si fiican u eegno qalbiyadeena, waxay u badan tahay inaan helno xasillooni iyo rajo aan waqti qaadano oo aan awoodno inaan sare u qaadno duco gaar ah kan ugu sarreeya.
Waa duco in la isoo waco oo aan cafis weydiisto waa la qaban karaa inta ay jirto baahi loo qabo in lala kulmo qofkaas gaarka ah.
Waxay noqon kartaa cunug, lammaane hore, xubin qoyska ka mid ah ama saaxiibo aanan arkin muddo dheer isla markaana horeyba ugu baahnaa xiriir toos ah oo la lahaan karo marka uu wajaho qofkaas.
Salaadda rajo la’aanta in la i soo waco
Aabbe oo lagu caabudo, waxaan ka baqayaa in laygu diido… Fadlan waxaan kaa codsanayaa (MAGACA QOFKA) I soo wac oo ii sheeg sida aad aniga ii dareemayso, si aan u muujiyo dareenkaaga oo dhan.
Markaa waan ku faraxsanaan karaa in aan la iiga abaal marin. Xoog i siiya inaan wajaho xanuun la'aan, Waan ogahay in dhinacaaga aan ka adkaan karo oo adkaysto wax kasta oo yimaada. Waligaa ha iga tagin Aabe, adiga kugu xiga ayaan kaa xoog badnahay
Markaan si joogto ah qof maskaxda ugu hayno, kama fogaan karno inaannu wax ka ogaano mar kasta sababtoo ah baahida ayaa xoog leh waxaanan dooneynaa inaan la xiriirayno laakiin ma taagnaan karno ilaa aan guriga tagno, sidaa darteed wicitaanka taleefanku wuxuu umuuqdaa ikhtiyaarka ugu fiican.
Tani waa sax ujeedka ujeedada tan salaadda quus. Waxaa loo yaqaanaa maxaa yeelay waa dillaabdii ugu dambeysay ee aan adeegsan doonno waana dhaqan gal iyo awood boqolkiiba boqol ah.
Tukashadu kaligeed waxay gudbisaa tamar wanaagsan oo haddii salaaddan aan kor ugu qaadno iimaan weyn markaa natiijooyinka ayaa noqon doona wax lala yaabo.
Afkeena waxaan ku leenahay awood aad iyo aad u weyn, oo aan ku dhisi karno ama ku burburin karno. Tani waa sababta ay tahay in salaaddan loo sameeyo daacadnimo iyo mas'uuliyad buuxda ka yeelo waxa aan qabanno.
Had iyo jeer ku qiimee kuwa kale inay ka sarreeyaan nafteena, sida ereyga Ilaah leeyahay.
Salaadda San Antonio ii soo wac
San Antonio Maanta waan kuu imid sababtoo ah waxaan u baahanahay caawimaad ...
Waxaan rabaa (MAGACA QOFKA) inuu i soo waco aniga waxaa iga go'an inaan u sheego / sheego sida aan dareemayo laakiin waa haddii uu isagu / iyadu soo waco ...
Waxaan ka baqayaa maxaa yeelay waa laygu diidi karaa laakiin waxaan ubaahanahay inaan ogaado. Adiga ayaa ah kan kaliya ee awooda inaad iga caawiso arintaan San Antonio waxaan rabaa inaan wajaho daqiiqadan maxaa yeelay waxaan ubaahanahay inaan ogaado hadii la iisoo celinayo hadii kalena aanan aheyn, waxaan awoodi doonaa inaan eego jahooyinka cusub ...
Wicitaankan aniga wax weyn ayey ii tahay aniga waana sababta aan ugu baahanahay inay u dhacdo sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah waan baqay laakiin waan ogahay inaan ka gudbi karo
Codsashada wicitaanku waa dabiici.
Waxaa jiri kara ujeedooyin badan oo wicitaankani leeyahay, tusaale ahaan waxay noqon kartaa in la helo cafis lama huraan ah si loo awoodo in horay loo socdo, in si fudud loo ogaado sida qofka kale yahay, in la gudbiyo in uu wali joogo marwalba, gaagaaban, waxyaabo badan.
Arrinta la yaabka lihi waxay tahay in codsiku uu isku mid yahay: i soo wac.
Hadey haa tahay, weydii kaliya, way fududahay. Ceeb la'aan ama cabsi la'aan laakiin leh cad oo ujeeddo daacad ah helitaanka wada-xiriirkaas oo aan aad ugu dheeraynay.
Waad kari kartaa waana inaad ku tukataa salaadda oo dhan.
Dhammaantood waa kuwo aad u xoog badan oo haddii dhammaantood loogu duceeyo isla qof isku mid ah waxay yeelan doonaan awood badan.
Had iyo jeer iimaanka ku tukada salaadda si aad iigu soo wacdid 10 daqiiqadood oo aad jacayl ugu farxo!
Salaada ilaa Saint Cyprian